समाचारमा - Popular Jewelry
उद्योग मा एक अग्रणी ज्वेलर को भित्र स्कूप चाहनुहुन्छ? कसरी अनुकूलन गहना र / वा ग्रिल बनाइन्छ मा रुचि छ? हाम्रो विश्व स्तरीय सेवाको भित्री झलकमा रुचि छ? तपाईं कभर गर्न चाहानुहुन्छ के एक कहानी छ वा हामीलाई तपाईंको मिडिया प्रोजेक्टमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् info@popular.je જ્વેલरी मिडिया सोधपुछका लागि।
मिडिया र प्रकाशनहरूमा लिंकहरूको एक संक्षिप्त चलिरहेको सूची हामी चित्रित वा यसमा देखा पर्दछौं:
लेख / प्रिन्ट
वृत्तचित्र / अन्तर्वार्ता
चलचित्र / संगीत भिडियो
पोडकास्टहरू / रेडियो
सिनोभिसन - चिनटाउनमा र्याप प्रसिद्ध आभूषण स्थान